Ụbọchị My Pet » Ise ụzọ na-Back gị Ex.
emelitere ikpeazụ: Oct. 29 2020 | 3 min agụ
Ya mere, ị messed elu? WERE ya maka nyere? Ndi-adịghị egosi na ezuru mmasị mkpa ha na-egbo mkpa nke mmekọrịta gị? Echefuola na ịhụnanya nke ndụ gị na ị chọrọ ya azụ? Ọ na-aga na-a siri ike n'ụzọ na-azụ n'ime ya obi ma ọ bụ nke ọma kwesịrị ya. Mgbe nile ọ bụghị ụbọchị ọ bụla na onye na-ezukọ na ịhụnanya nke ndụ ha na ha na-megwara ha mmetụta ha. The ogologo ndepụta ndị na-aga ọsọ-mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, wdg … bụ iji na-egosi na ihe ị na-achọta na nwoke a bụ obere. Ma mgbe ahụ, ị ​​maara ihe nile na ihe nile njikere ma na-enwe mmetụta bara nnọọ egwu ugbu a n'ihi na ị pụghị jide ha na gị na ogwe aka ma ọ bụ ịgwa ha okwu. Ma, ndị niile na-agaghị efu. Ị nwere ike dịkarịa ala na-agbalị gị hardest-esi na ha azụ na puru bụ na ọ bụrụ na e nwere ịhụnanya siri ike n'ebe ọ ka ga na-n'ebe ha n'akụkụ kwa. All mkpa ka ị na-eme bụ Ọsụsọ ya ka ha na-eleghị anya na-eme ka gị na-agbalị gị hardest na-egosi ha kpọmkwem ihe ha pụtara nye gị. Ebe a na-dị nnọọ ụfọdụ n'ime ụzọ ndị i nwere ike ime na ụmụ okorobịa na gals!
1. Kọwaa ihe mere i Mesoo Ha Ụzọ Ị mere
Ọ na-eleghị anya mgbagwoju anya dị ka ihe mere i ji were ha egwu egwu ma ọ bụ mesoo ha merụsịrị. Nke a apụtaghị na ọ pụtara na i kwesịrị ime ka ụfọdụ na-esi ọtụtụ akụkọ banyere ihe mere i ji mere. Ọ pụtara-eme ihe n'eziokwu. Ọ pụrụ ịbụ na ị na-eto eto, ị na-aghọta ihe ị na-nwere ruo mgbe ọ nọ na-arahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke ihe. Ọ dịghị onye zuru okè ma ọ bụrụ na ha hụrụ gị n'anya n'ezie, ha ga-ahụ gị n'anya n'ihi na ihe niile ha na-asị banyere gị onwe gị kwa. Ma nkwurịta okwu bụ mgbe a isi mgbochi mmekọrịta. Ha kwesịrị ịghọta ihe mere i mere ihe i mere. Ị ji ha na ha ga-ekele gị n'eziokwu na eziokwu na ị bụ dimkpa na ndị tozuru okè iji na-ekweta na ị bụ na-ezighị ezi.
2. Nọrọ na kọntaktị na Ha
O doro anya na nke a bụ ihe siri ike onye ha n'ihi na ha nwere ike ghara chọrọ ịnọ na kọntaktị na ị. Ma i nwere na-asọpụrụ na. Ma nanị ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ha na-ekwu ndewo na okwu ole na ole. Gosi na ị na-chefuru ha. Gosi ha na ị na-eche na ị na-anọ na ha ma na ị na-akwanyere na bọl dị ha ikpe ugbu a.
3. Gwa ha na ị bụ Ndo
O yiri kama mfe ma ọ bụ mgbe ndị kasị ihe siri ike n'ụwa n'ihi na a onye na-eme. On n'akụkụ nke ọzọ, e nwere ndị na-asị na ọ dị nnọọ mgbe. Ị mkpa tie a itule ebe a. Ọ kwesịrị ịbụ n'obi na ezi obi na. Ị mkpa na-egosi ha na ị bụ ndo maka ihe i mere ha. Ere ha. Na ị chọrọ iji gosi ha na ị na-akwa ụta na ọ na na ihe ga-adị iche ma ọ bụrụ na ha na-gị azụ oge a. Ọ nwere ike na ọ bụghị naanị ịbụ okwu efu. Ha ga-ahụ site na gị ozugbo.
4. Gosi ha na Ị gbanwewo
Nke a apụtaghị na ihe dị ka onye n'ihi na o doro anya na e nwere ga-mba uche na. Ọ bụ onye ị bụ dị ka onye nke mere ya ada na ịhụnanya na ị na akpa ebe mgbe niile. Ọ pụtara na ị na-egosi ha na ị na-agbanwe ihe ọjọọ ndị a akụkụ na ụgbọala na ị ma iche na akpa ebe. I kwesịrị igosi ha na ị pụrụ ịhụ ebe ị na-ezighị ezi dị ugbu a na ị mụtara na ya.
5. Agha n'ihi na Ya
Otu n'ime ndị kasị ihunanya ihe i nwere ike ime na-alụ ọgụ maka nwoke ị hụrụ n'anya. Ị na-alụ ọgụ maka onye ị hụrụ n'anya mgbe niile ka megide-amasị ma ọ bụ fancy. Na site na gị na-alụ ọgụ ha na-egosi ha na ha niile na-na nsogbu gị ugbu a ị na-egosi na otú ihe ị hụrụ ha n'anya. Ga na-agwa ha. Ị na-eche na-amasị a oke akụkụ nke ndụ gị na-efu, na ị na-ata ahụhụ nnọọ. -Adị njikere itinye onwe gị na akara na adịghị ka gị mpako na-na ụzọ. Ọ dịghị onye chọrọ ka a ga-ekpe owu na-ama na mpako ha akọ.